Islam – Page 3 – Puntland Voice
Magaca Sheekh Cali Suufi sidee ku baxay? Daawo
Sheekh Cali suufi (suufi) awowgiis magacaas magaciisu ma ahayn ee waxay ahayd naynaas aabahay u baxday intuu ardayga ahaa, sababta naynaastaas loo siiyey baan idiin sheegaya Aabahay Alle ha u naxariistee asagaa nooga sheekeeyay. “Waagaan ardayga ahaa oon xamar joogay […]
I Love you Xaaskaaga ma tiraahdaa? Sh Muxamed IDIRIS DAAWO!!
Abdullahi ibu Cabbaas wuxuu yiri saan u jeclahay inay xaaskayga isugu kay qurxiso ayaan anna u jeclaa uguna dadaalaa inaan anna isugu qurxiyo, ee adigu xaaskaaga ma isu qurxisaa? Kilimad wanaagsan & ereyo macaan ma ku dadaashaa inaad guriga ku […]
Cudurka Furriinka oo umaddeenna ku batay maxaa lagu dawayn karaa??
Jawaabta ka dhagayso Sheekh Saciid Muxamed Faarax oo si cilmi & majaajilo ku jirto ku dawaynaya cudurkaan. Sheekhu wuxuu tirinayaa sababaha uu ku dumi karo gurigaagu isla markaana wuxuu ku tusayaa kuuna tilmaamayaa saad oga fogaan lahayd kuna dawayn lahayd. […]